Iindaba - Ivenkile yokuTshintsha uMdlalo we-eCommerce
Umtshintshi womdlalo kwihlabathi le-eCommerce, ayikho enye ngaphandle kweqonga lokuthenga.
Ngokusisiseko, iapps yokuthenga iyiphakheji yamava onke okuthenga oku mobile, oko kukuthi, ukufumanisa, ukuhlawula, kunye nokuhanjiswa kwisicelo esinye. Abathengi bangena kwi-imeyile nge-imeyile, belandela iintlobo ezahlukeneyo ze-Shopify-powered ezihambisa iindaba ezenzelwe wena zeemveliso ezicetyiswayo.
Benza ukhetho lweemveliso, baqhubeke ukukhangela kwaye bagcine umkhondo wokuhanjiswa. Ewe, i-Shopify sisicelo esifanelekileyo sokuthenga ngoku, kunye neenkonzo zokuphucula i-Shopify ziyaqhubeka nokunyuka.
Oyena Makhi weVenkile ekwi-Intanethi
I-Shopify ithathwa njengeyona ndawo ibalaseleyo ye-eCommerce kwintengiso yanamhlanje.
Yenzelwe ukunceda abantu ukuba bakhe izinto ezinokuthenjwa, iivenkile ezikwi-Intanethi ezinamakhulu ezinto ezakhelweyo kunye neetoni zokusebenza, i-Shopify yeyona ndawo ifunwa kakhulu emva kokuthenga kule mihla. Ukuthengisa ngokuthe ngqo iimveliso kunye neenkonzo kwiwebhu, kwimithombo yeendaba zentlalo nakwiindawo zentengiso ezahlukeneyo kulula nge-Shopify.
Xa uqala ishishini le-eCommerce, zininzi izinto ekufuneka ukhathazekile ngazo, kubandakanya ukufumana imveliso yentengiso efanelekileyo, ukuthengisa iimveliso, ulawulo lwempahla, kunye nokwenza isicwangciso sentengiso.
Ukuba awuzange ube namava ngokwakho, cinga ngokuvumela ingcali, enje ngevenkile yokuphucula ivenkile yenze indawo yokuphuhlisa izinto. Ukuqesha umbhekisi phambili kukuvumela ukuba uchithe ixesha elininzi ekwakheni ezinye iinkalo zeshishini.
Ngaphandle kwebhokisi, iqonga lelona linamandla kwi-eCommerce eyakha iwebhusayithi. Inayo yonke into onokuyifuna ukuseta nokulawula ishishini lakho. Iivenkile ezandayo nezitena zihamba kwi-intanethi, ngelixa ii-brand ezaziwayo ze-eCommerce zivula iivenkile ezithengisa ukutya nezitena.
Kwi-eCommerce namhlanje, akukho nto iyafana neminyaka elishumi ibuyile. Wonke umntu oneshishini kwinkulungwane yama-21 ngokwendalo uyazi malunga noShopify. Nangona kunjalo, ngaphandle kokuxhaphaka kwayo, bambalwa abayiqonda ngokupheleleyo imbuyekezo ebonakalayo kutyalo-mali olunikayo.
Abasunguli beqonga, ngaphandle kwemfuneko bayiphuhlisa emva kokufumanisa ukuba iinketho ezikhoyo ze-eCommerce azonelanga ngokuthengisa. Beze ne-Shopify ngesakhelo somthombo ovulekileyo. Ukusukela ngoko ikhulile amandla ayo okubandakanya izinto ezinje ngokubandakanyeka komsebenzisi, ukuthengisa kunye nokunye okuninzi.
Ivenkile, yintoni kanye kanye?
Kwiintetho ze-eCommerce kunye nentengiso kule mihla, i-Shopify sesinye sezisombululo ezihlala zikhutshwa.
Wonke umntu unqwala ngesivumelwano, kodwa bambalwa kuphela abayiqondayo indlela yokusebenza yeqonga. Ukubeka nje, i-Shopify yindawo efanelekileyo yeemveliso zentengiso ye-Intanethi kunye nokuthengiselana kwe-eCommerce.
Liqonga elenza abo banoluhlahlo-lwabiwo mali olulinganiselweyo bangene kwindawo ye-eCommerce, ivumela abo banolwabiwo mali olukhulu ukuba bakhulise uphawu lwabo, kwaye okona kubaluleke kakhulu, bavumele iivenkile ezibonakalayo ukuba zivale umsantsa phakathi kweshishini lomntu kunye nentengiso ye-Intanethi, enkosi kwi-Shopify's Inkqubo yePOS yobunini.
Kumashishini amaninzi ahlukeneyo, i-Shopify zizinto ezininzi, yiyo loo nto sele isasazekile phakathi kwentengiso ephumeleleyo kwi-Intanethi nakwi-eCommerce kule minyaka ilishumi idlulileyo.
Isuti yayo yeemveliso kunye neenkonzo zinokulinganiswa nakubuphi na ubungakanani beshishini. Ukuthengisa kwidijithali, ukubonisana, ukuthengisa ngokwasemzimbeni, ukubhatala, izifundo, ukurenta, kunye nokunye okuninzi- i-Shopify yenzelwe ukuba ibe yindawo yokuthenga zonke izinto ze-eCommerce.
Kulabo banqwenela ukuba ngoosomashishini kwi-Intanethi, oku kubaluleke ngakumbi.
Kutheni usakha nge-Shopify?
Isidingo kunye nemfuno yophuhliso lweShopify ikhule ngokuxhumaxhuma kunye nemida. Iqonga kudala ilukhetho olukhethiweyo kubathengisi abahamba ngokulula kunye neempawu ezizityebi ekulawuleni iivenkile zabo ze-eCommerce. Ivenkile yenza nezi zibonelelo zilandelayo:
Iqonga lineetemplate zangoku kunye nezobuchwephesha zokwakha iivenkile ezikwi-Intanethi ezithandekayo. Nangona iza nemixholo engenanto, ukusebenza kunye ne-Shopify yokuphuhlisa umxholo kunye nabaphuhlisi kuya kuzisa amava atyebileyo omsebenzisi kunye nomsebenzisi kubakhenkethi.
Ngokungafaniyo nezinye izisombululo ze-eCommerce, i-Shopify ayinangxabano kwaye kulula ukuseta kunye nomsebenzisi kubo bobabini abaphuhlisi kunye nabangengabo abaphuhlisi. Inika isoftware kunye nokubamba ukumilisela iwebhusayithi. Ngapha koko, ujongano lomlawuli luyasebenziseka kwaye linomdla.
3. Unokuthenjwa kwaye ukhuselekile.
Ukwakha nokulawula ivenkile ekwi-intanethi ekhathalela ulwazi olubuthathaka lomsebenzisi, njengeenkcukacha zakho kunye nolwazi lwekhadi letyala, njengosomashishini onokufuna ukuba ithembeke kwaye ikhuseleke. Ivenkile yenza oku kubandakanya ngokugcinwa rhoqo kunye nokuhlaziywa.
4. Ukudityaniswa kwesicelo.
Iqonga lokuthenga likwakuvumela ukuba wenze ngokwezifiso ivenkile yakho ekwi-intanethi ngokulula, kunye nokudibanisa iiapps, ezivumela ukongeza amanqaku ngakumbi kunye nokusebenza kokunyusa.
5. Isantya esikhawulezayo.
Olunye uncedo kuShopify sisantya esikhawulezayo ngenxa yezixhobo kunye nesoftware. Ukulayisha ixesha kunesiphumo esibalulekileyo kumgca osezantsi, kuba abathengi bathanda ukushiya indawo ethatha ngaphezulu kwemizuzwana emine ukulayisha. Ke, kubalulekile ukuya kwisisombululo esikhawulezileyo.
6. Izixhobo zokuthengisa ezibalaseleyo.
Ivenkile inikezela ngezixhobo zokuthengisa kunye nokukhulisa ishishini. Inguqulelo esisiseko ibonelela ngezixhobo ezintle zohlalutyo kunye neempawu ze-SEO. Ngapha koko, ibonelela ngeempawu ezinje ngezikhuphoni zesaphulelo, ubalo lwevenkile, ukuthengisa nge-imeyile, amakhadi ezipho, nokunye okuninzi.
Kutheni iqonga elinjengeShopify ikamva le-eCommerce
Ukuthengiswa kwe-eCommerce kwihlabathi liphela kuqikelelwe ukuba kufikelele phantse kwi-5 yezigidi zeerandi kulo nyaka okanye kunyaka olandelayo. Eli nani limele ukukhula ngama-265 eepesenti xa kuthelekiswa nonyaka ka-2014. Ukukhula kungabangelwa kakhulu ngamathuba entengiso zehlabathi.
Kunyaka olandelayo, phantse iipesenti ezingama-20 zentengiso ye-eCommerce ziya kubangelwa kubathengi baphesheya. Kukwanjalo nakwisiseko sabathengi basekhaya njengoko i-intanethi isaphula imida yenkcubeko kunye nokwahlulahlula imimandla. Abathengi ngoku banokuzibandakanya neempawu zangaphandle njengangaphambili, enkosi kwi-eCommerce.
Ishishini liyakhula, kwaye lifuna isiseko esomeleleyo ukuxhasa ukukhula okungathethekiyo. Okwangoku, i-Shopify kunye ne-Shopify yophuhliso lwe-app yinja enkulu enokhuphiswano kwihlabathi le-eCommerce, kodwa kukwakho nezinye. Nangona kunjalo, yintoni eyenza ibonakale kwaye yintoni eyenza ibonakale ngokwenene phakathi kwezinye izinto kukungafani kwayo.
Amava oxhulumeneyo eCommerce axhomekeke kwimpumelelo yezinto ezahlukeneyo. Nokuba uthengisa ngantoni, nokuba uyivenkile kwivenkile yakho okanye kwigumbi lakho elingaphantsi, i-eCommerce yinto efanelekileyo yokulinganisa. Iipokotho ezinzulu ezilingana ngokuzenzekelayo neshishini elihlala ixesha elide azisekho kwezi ntsuku.
Kule mihla, uphawu lwentengiso, isicwangciso sobuchule, kunye neendlela zeshishini ezinemfesane zinokukhokelela ekuphindaphindweni kweshishini. Iikhredithi kumaqonga anjengeShopify, isithintelo sokungena kwihlabathi le-eCommerce alizange liphantsi. Nabani na onomsebenzi oqinisekileyo wokusebenza, umbono olungileyo, kunye nentwana yethamsanqa unokuphumelela kwindawo yentengiso ye-Intanethi.
Amathuba amakhulu aqhubela phambili ukuKhula kwexesha elizayo likaShopify
Nangona iqonga lokuthenga lisebenza kumazwe ali-175 kwihlabathi liphela, kungamangalisa ukuba abatyali mali bazi ukuba uninzi lweentengiso ezivelisiweyo zikuMntla Melika. Inkampani isebenze nzima ekwandiseni ukufikelela kwayo kumazwe aphesheya kunye nokusebenza kwayo, kunye nokubonelela ngezixhobo zalapha ekhaya kwisiseko somrhwebi wehlabathi.
Namhlanje, i-Shopify iyafumaneka kwiilwimi ezingama-20 ezahlukeneyo kwaye iiNtlawulo zeShopify zandisiwe ukuya kumazwe alishumi elinesihlanu. Ekupheleni konyaka ophelileyo, abathengisi abaninzi kwihlabathi basungule amashishini abo kwiShopify.
Inethiwekhi yokuThengiswa kokuThengiswa kweShopify ipasisiwe kunyaka ophelileyo, kodwa zonke iimpawu zibonisa ukuba ikamva lenethiwekhi liqaqambile. Amakhulu amawaka abarhwebi bavakalise umnqweno wabo wokuba yinxalenye yenkqubo yokufikelela. Shopify ukusukela ngoko uthathe indlela elinganisiweyo, ukongeza kuphela 'uninzi lwabathengisi' kodwa ugcina kugxilwe kumgangatho wentsebenzo ngaphezulu kwesikali kwinqanaba lokuqala.
Lo nyaka uza kuba 'lutyalo-mali olunzima' kwiShopify, njengoko oosomashishini abaninzi becinga ngokutyala imali kwizisombululo zeShopify.
Ubhubhane weCoronavirus, ngelixa emisa amashishini amaninzi kwaye echaphazela izigidi zabasebenzi kwihlabathi liphela, abantu babone ithuba lokwenza ishishini kwi-Intanethi, njengoko kuthintelwa kunye nolawulo lwemida. Ngesidingo sokuba abantu bahlale ezindlwini, ukuthenga kwi-Intanethi kuye kwanda.